80,000 oo reer Minnesota ayaa si dhaqso ah isu hubayn doona. 3 sano ka dib tiradan waxaa la filayaa inay gaarto 640,000
Soomaalida Minnesotase ma ka qayb qaadan doonaan?
Xildhibaan LyndaBoudrean oo laga soo doorto Fairbault, Minnesota ayaa soo jeedisay sharci cusub oo la ansixiyay kaas oo sahlaya qaadashada hubka si qarsoon. Sharcigan oo ay dad badan diidanaayeen ayaa la ansixiyay wuxuuna dhaqan gelayaa bishan May 28deeda. Dadka diidan waxaa u badan booliiska, kaniisadaha, iyo dad badan oo reer magaal u badan. Xildhibaan Lynda waxay ay sheegtay in ay markay yarayd wax dhici jirtay oo ay garanayso macnaha iyo xikmadda qori haysashadu leedahay. Dadka jecel hub qaadashada waxay u badan yihiin beeralay, iyo kuwa cayaar ahaan u ugaarsada iyo maalqabeen.iyo kuwa kale. Shuruudaha qofka raba inuu qaato hub waa
1) Inuu miyir qabo
2) Denbi hore uusan gelin
3) Inuu jiro 21 ugu yaraan
4) Inuu degan yahy meesha uu ka codsanayo
5) Inuu qaato training.
Muddada la sugayo waxay noqon doontaa 30 beri inkastoo qofkii la yimaado shuruudo macquul ah loo dedejin doono. Hay’adaha loo shaqeeyo ama dadka loo shaqeeyaa waxay xaq u leeyihhin in ay yiraahdaan hub ha igala soo gelina goobtayda, sidoo kale qofka wuxuu xaq u leeyahay in uu yiraahdo gurigayga ha igala soo gelin. Qiimaha ruqsada hubkan waa $100 oo keliya. Dad lagu qiyaasay ilaa 80,000 ayaa la filayaa in ay noqon doonaan raca hore kuwaasoo is diiwaan gelinaya si ay hubka u qaataan, qaarkood goor hore ayayba tababarkii qaateen
. Su’aasha la iswaydiinayaa waxay tahay dadkan maxay isu hubaynayaan. Dadkan waxay aaminsan yihiin in dawladdu ammanka wadanka si guud u qaabilsan tahay ammaanka qofkana 50% in qofku is ilaaliyo inay haboon tahay waayo ayay yiraahdeen dawladdu meel walba ma joogto sidoo kale waxay ku nuuxnuuxsadeen inay ujeedadoodu tahay oo keliya in ay isdaafacaan. Waxaa kale oo ay aamin san yihiin in dembiyada la galo sida dilka iyo tuugada iyo dhacaba yaraan doonaan ayagoo ku halqabsaday sanad ka dib in dilalka iyo dembiyada Minnesota yaraan doonaan.
Doodooda waxaa ugu xoog wayn in ay aaminsan yihiin in haddii ayaga loo diido ay danbiilayaasha u fiicnaan doonto waayo denbiilayaasha mar walba hub waa helayaan ee waxa aan hub helayn waa dadka sharciga ilaaliya oo marwalba aan waxba galabsan. Dadkan waxay saadaaliyeen in Minnesota meel fiican noqon doonto oo denbiyada yaraan doonaan.
Soomaalida Minnesota iyo hub qaadashada
Soomaalida Minnesota hamuun iyo oonba uma qabaan inay is hubeeyaan sababaha ugu waawayn ayaa loo malaynayaa inay ka mid yihiin waayo aragnimo iyo aqoondheeraad ah oo ay u leeyihiin hubka iyo nabaradii dagaaladii sokeeye oo ay dhibaatadiisii dhegahooda ka sii yeerayso. Mar aan waydiiyay dad badan oo Soomalida Minnesota ah in ay rabaan in ay ka faaiidaystaan sharciga cusub waxay ii sheegeen in aanay u socon bil cagsi inayba jeclaan lahaayeen in sharcigan aanan la dhaqan gelin. Soomaaliya waa meesha ay caruurta aad u da’da yar kala garan karaan dhawaaqa qoryaha iyo sida loo rido iyo magacyadoodaba.
Soomaali badan oo ku sii qulqulaysa Atlanta
Habeenkii waxbarashada Soomaaliyeed ee Atlanta
Waxaa bishan May 24keeda laga bilaabayaa Atlanta usbuuc cayaaro iyo habeen waxbarasho intaba isugu jira halkaas sidaa darteed waxaa la isaga imaanayaa Canada iyo gobolada kala duwan ee Maraykanka sida Minnesota, Ohio, iyo meelo kale. Dadka halkaas tegayaa waxaa ka mid ah cayaartoy badan oo ka baxaya usbuucan Minnesota iyo aqoonyahano badan. Reer Atlanta ayaa ku mashquulsan soo dhowayn iyo isku duba ridka barnaamijkan balaaran waana mid sanad walba la qabto marka iskuulada la xiri rabo wixii faahfaahin ah la xiriir Burhaan burabdi@hotmail.com ama 404-324-6009
Ogeysiis ku Jeeda Soomaalida Atlanta
»»Waa kulan kusaabsan habeenka waxbarashada Somalida Guji